Ezigbo rentzụ tomụaka Imezi Omume Ọjọọ na inmụaka | Ndị nne Taa
Ezi nne na nna iji dozie akparamaagwa akparamaagwa na obere ụmụaka
Maria Jose Roldan | | Atụmatụ, Ezinụlọ
Ezigbo ịdọ aka ná ntị na-ezube itinye ụmụaka n'ụzọ nkwanye ùgwù ma gbaa ndị nne na nna ume icheta na ụmụaka nwere ike imeziwanye n'agbanyeghị agwa adịghị mma. Mụaka na-achọkarị ịmatakwu ihe ma na-achọkarị ịba mba.
Iso nwa gị jikọọ tupu ịme mmezi ọ bụla bụ ụzọ dị mma iji meziwanye omume. Anyị enweghị ike imetụta ụmụaka n'ụzọ dị mma ruo mgbe anyị mepụtara njikọ na ha.
Oge ọ bụla nwa gị gafere oke, dara iwu ma ọ bụ karama ncha ntutu, tupu ya agbazie omume ahụ, buru ụzọ nwaa nwayọ. Mepụta oge amara nke njikọ. Oge ị ga - eji obi ike nye nwa gị nchekwa na nghọta.
Banye ụwa nke nwa gị. Lee anya gabiga ọgbaghara jọgburu onwe gị ma lelee mmụta na nchọpụta na-eme. Chetara ya na ị bụ enyi ya, na ị nọ n'akụkụ ha. Ọbụna mgbe ị kwuru mba ma ọ bụ mee mkpesa banyere omume ha.
N’ezie, ọ naghị adị mfe mgbe niile ịnọ jụụ ma mee ka nri niile wụfuru n’ala adịghị mkpa. Ihe ị na-ekwu bụ na nwa gị chọrọ ka obi na-adị gị mma ma na-agwa ya ihe ọ ga-eme ma ya mejọọ ihe. Inwe atụmanya ndị ezi uche dị na ha banyere omume ụmụaka ga - enyere gị aka ịme mkpebi ịdọ aka ná ntị ziri ezi ma jikọta ya.
Mmekọrịta ndị a dị mkpa n’oge dị mkpa n’ihi na otu ị họọrọ ịdọ aka na ntị na-akpụzi nwa gị. Oge a chọrọ ịdọ aka ná ntị bụ ụfọdụ n'ime oge kachasị mkpa na ịzụ ụmụ. oge anyị nwere ohere ịkpụzi ụmụ anyị ike.
Onlinega ntanetị tupu ị mee mgbazi na-enyere ụmụaka aka ịtụkwasị gị obi. Ọ na-enyere gị aka ịhụ nwa gị n'ezie. Ghọta nwa gị n'ezie, n'oge ahụ na ihe dị ha mkpa. Ijikọ ahụ na-enye gị ohere ịmepụta oge bara uru iji gee ntị, kwado ma kwenye nwa gị. Soro ndụmọdụ ndị a iji nweta ya:
Mee ka ihe ị na-atụ anya ya ma ọ bụ ụjọ na-atụ gị (cheta na nwa gị ezughị okè dị ka gị)
Lelee ihe anya otú nwa gị si ele ya anya
Gee ntị n’ihe ọ ga-agwa gị
Lekwasị anya n'ihe ngwọta na ohere
Jiri mmetụ ahụ dị nro iji jikọọ
Jiri obiọma gwa ya hoo haa
Nọgide na-enwe anya na anya ma gbadata larịị nwa gị
Na-enye mgbazi mgbe niile site na nkwanye ùgwù
Disdọ aka ná ntị sitere na ebe ịhụnanya na nlekọta na-akụzi. Mgbe izizi ị jikọtara, ị na-agwa nwa gị okwu n’obi na n’otu oge. Nke a dị ike. Nke ahụ bụ ịdọ aka ná ntị. Nke ahụ bụ ụzọ doro anya iji nwee agwa ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » Ezi nne na nna iji dozie akparamaagwa akparamaagwa na obere ụmụaka
Ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma maka ikiri ezinụlọ
Obọchị Osimiri Worldwa: ihe omume maka ụmụaka